Wp/kjp/ခါန်ႋဆိုဒ်ဖေါဟ် အ်ုမူႋဏီ ဖတုံႋထာခေါဟ် - Wikimedia Incubator
Wp/kjp/ခါန်ႋဆိုဒ်ဖေါဟ် အ်ုမူႋဏီ ဖတုံႋထာခေါဟ်
< Wp‎ | kjpWp > kjp > ခါန်ႋဆိုဒ်ဖေါဟ် အ်ုမူႋဏီ ဖတုံႋထာခေါဟ်
ပ်ုဖၠုံဖေါဟ် ထီ့ခါန်.ဖေါဟ်ထံင် လ်ုဏီယိုဝ်၊ ဖူ.ဍေဝဵ ပ်ုဟှယ့်ထံင် ဍုံလ္ဂုင်.ယိုဝ်၊ ထုဂ်လ်ုဝါ် ထာခေါဟ်ထာခၠါင်လ်ုဏါင်းယိုဝ်၊ ဟှေး…. ဖီ့ဖူ့လ်ုယာ့ ကေဝ်ဏါင်းထဟှံင်၊ လာဆီ့ဏီ့ဘိင်း အ်ုဟှာင်ကျံင်း၊ မွာဲလင်ဖိုဝ်းဝယ်၊ ဖၠုံယှင်ဖေါဟ်အ်ုကျံင်းဖံင်၊ ကိုဝ် ပါင်ဆိုင်…… ခွဲါက္ၜင်မူးခွါ့၊ ရာ.ဓနာဝေံ၊ အှ်ဆံင်လာဆာ် ကိုဝ်ဟှာဍေ။
၁။ ထာင့်ခုက်ဖေါဟ် ဆင်ခူးလင်ဃှိင်၊ မာဆိက်မာဏါ ဟှံင်လုက်ကၠင်။ `နာသတ်ဖူသျှ´ ဖင်စာစိင်း၊ ဆင်ဖဝ့်ဖါထင်း နိုင့်မိုင့်ခၠိုင်း၊ ဖၠုံဏိင်းထင်းသင့် အူးဍေဟှိင်၊ ဃှူ.ထီဍေခေါဟ်အင်းဖံင့်ဍိင်၊ ဖၠုံအင်းဘူးသင့် မုက်ယူ.ယိင်။
၂။ ထာင့်ခုက်ဖါဍောဟ်အေထံင်ထာင်ဏှ်၊ `မာဃနာသတ်´ ဟ်ုယောဝ်စိုဝ်ဖၠဟ်-ယောဝ်စိုဝ်ဖၠဟ် ဖဝ့်တ်ုကိုဝ်ဖဝ့် ဍးစိုဝ်ဝဝ်….၊ ဟှေး… သုင်းဆီ့ဖေါဟ်ထံင် အေသၞဝ့်၊ လုင်.သးလုင်.ခယ့် အးမာလဝ့်….၊ လေဝ်အင်းထိုင့်လး ဂြုက်တါဝ့် ထီဍေသိုဝ် သုက်မာ. ယှဝ်ယှဝ်၊ ဖၠုံဖေါဟ်သီးဟှေး- ထောဟ်ဖေါဟ်မံင် ဃွှိင်.ယူ.မာ.လဝ့်။
၃။ ဆ်ုခေါဝ်.စွးတယ် ထံင်လာသိုင့်၊ သိင်းလးမိင့်လင် ခေါဟ်လံင်ထိုင့်၊ ဖဝ့်ဍီးခၠီဖါထင်းနိုင့်မိုင့်၊ ´ဥတ္တရာနာသတ်´ ဏှ်လဝ်ဟှိုင့်၊ အင်းဖံင့်ဆီ့ဖေါဟ် သိုဝ်ဘးနိုင်၊ ယာ.သုဂ်ဃှါင့်ဟှံင် ယာ.သုဂ်ဃှံင့်သံင့် လ်ုလုက်လိုင်၊ သုင်းထင်းဟှိင်းသင့် ဟှယ့်တာင်ဆိုင်။
၄။ ကၠါဂ်စုဦခါ့ အေထံင်လာတာ၊ ထီ့လင်သာ်ဟှင်းခေါဟ်ဃှါင့်ထာ၊ ကျဝ်ဘာက်ုလေင့်-ကျဝ်ဘာီကု်လေင့်၊ လီဟှင်းအာ….။နာသတ်ဖၠဟ်ထင်းစိတ္တရ၊ သိင်းဍိုဝ်ထင်း ကံင်ကါင်းဖဝ့်ဖါ၊ လေဝ်ဍွဲဃှုဂ် ကောဝ်မိင်လးကာ၊ ကိုဝ်ဏိင်းဍေ အင်းဃှယ်ကိုဝ်အ်ုဟှာ။
၅။ လာယာ့ထံင်ထာင် လင်သင်းဝင်၊ ´ဝိသာခါနာသတ်´အှ်မုဂ်ဍုင်၊ ဆ်ုဆိုင်ဝေ့ လ်ုဘင်ၮီ့ဘင်၊ ဃှူ့ဍေနဲယာ့ဘင်သုင်းလင်၊ ပ်ုကျာပဝ်.သၞဝ့်ဃှူ့ဃှင်၊ ဖဝ့်ထောဟ်ကီးဖါ အ်ုယံင့်ဘင်၊ ဟ်ုဘးတယ်ထယ့် သုင်းလင်ကျင်။
၆။ ဆ်ုဆိုင်ဍောဟ်လင် လာနုဲ့ထံင်၊ ကာလ်ုပါထင်းထီံ့ယွာဖံင့်၊ လင်ဆိက်ဖိုင်ဆ်ုမာပ္တံင်၊ ဃှုဲးလင်္ဘူးမ(မျ)မွာဲအေဟှံင်၊ လင်သာတာ်အှ်အ်ုဖံင်၊ ဟှေးနာသတ်ဇေဌမွာဲဍးခံင်၊ ဖဝ့်ကးဍေအ်ုဏါင်. ဖါထင်းယှံင်။
၇။ ဆ်ုဆိုင်ဆ်ုဆိုင်အးတယ်၊ လာဃှိုဝ်ထံင်ထာင် ဆိက်ထင်းခံင့်ဖင့်ဘူးဍုဂ်ပါင်၊ ဘင်းဖဝ်.သှ်ေဘိုဝ်လ်ုလာင့်ဏါင်၊ ကဝ်သုဂ်သာ့ဖါထင်းဝိက်ကာင်၊ ဘူးခယ့်ကောဝ် လေဝ်ဘိုဝ်ဍေဏါင်၊ နာသတ်ဗြုဗ္ဗာဍးစိုဝ်ယာင်၊ မီသးမိင့်ထီ့ဍောဟ်မ်ှေဖါင်။
၈။ ဆ်ုဆိုင်ကျုဂ်လာခုဂ်ထံင်ဏှ်၊ ဖဝ့်လာခုဂ်ဖါထင်းသၞဝ့်၊ ဿရဝဏ်နာသတ် ယောဝ်စိုဝ်ဖဟ်၊ သုဂ်ဆူမိင့်ဘုံလင်ပျောဝ်ဖဝ်.၊ ထီ့ဍောဟ်ေမှ်ေဖါင်၊ ကိုဝ်ဝီးလာ ခါင်ကုံစူးလဝ့်၊ ဖၠုံကိုဝ်ဆိုဒ်ဃှူ့ဃှင်ဘးသၞဝ့်။
၉။ လာဆီ့မူ.ထံင်ယိုဝ် ဆ်ုခေါဝ်စွး ယးဖေါဟ်စာင်းယှိုဝ်၊ သာ့ပၠတာဖါထင်းဃှိင်.ကောဝ်၊ ဟှေးဖေါဟ်လီးဖဝ့်ပါကဲ ဆ်ုဍိုဝ်၊ ကောဟ်ထေံဘိုင်းအင်းဍေ ဖေါဟ်နိုဝ်၊ ဍုံမူ.ထုင်းဟ်ုဘးလင်ကောဝ်။
၁ဝ။ က်ုတုဂ်ဝှ် လာမုက်စွးတယ်၊ အာသာဝတီ ယှးဖါန်.ခယ်၊ တ်ုကဝ်သွါ့ဖါထင်းဃှု့ဦ၊ လေဝ်ကေါဝ်က်ုလံင့် ဃှုဲးလင်္ဘယ်၊ ဆုင်ထင်းမ်ေုပုံ.လေဝ်ပါမုက်ကုဦ၊ ဖၠုံဘူးပ်ုတာအ်ုထာ်ဆာ.ယယ်၊ လေဝ်ကုဂ်ဘူးသိုဝ်အးမာလယ့်၊ ဖီဖူ့ ပ္တံင်ဏှ်အှ်ဝယ်။
၁၁။ ဆ်ုဆိုင်ထင်းသင့် ထံင်လာဏင့်ဖိုင်၊ ယှးလ်ုမုဂ်ခေါဟ် ကြတ္တိကာစိုင်၊ မုဂ်ခေါဟ်ဆ်ုအုင်းလ်ုအှ်လိုင်၊ ဟှေးဍိင်လိင်အ်ုဖဝ့်လ်ုနိုင့်မိုင့်၊ ဆိက်လင်ထီ့မူ့လာဆ်ုဆိုင်၊ မ်ုဖၠါယာ.သုဂ်ဍေသုင်းၰုဲ့သာယိုင်၊ဘေ့မ်ုအင်းယိုင်ဘေးမာဆိုင်။
၁၂။ ဘူးဝဝ်ထင်းလာလိင်ထံင်ဝေ့၊ မီ့ဂဿီနာသတ်ယှးဖါန်.လုဦ့၊ ပြိုင်ကုင်ဗူ့ဝီ.ဟှင်လုဂ်ခၠေ၊ ဏဝ့်ထင်းဘူးပုံ.ပါမုက်ကုဂ်ဦ၊ ဟှေးဖဝ့်မူ.ယှ ဖါထင်းဟှဝ်သုဦ့၊ စာင်းကုဂ်ကံင်းဘူးကိုဝ်ဏီဍေ၊ ဖၠုံဖီ့ဘူးယဝ် ယှောဟ်လာကိုဝ်ထုဦ့ သာဏင်းဃှေဝ်။ ကိုဝ်ပါင်ဆိုင်။
ခွဲါက္ၜင်မူးခွါ့ရာဓနာ.ဝေ့၊ အှ်ဆံင်လာဆာ် ကိုဝ်ဟှာဍေ။ ၮ်ုထာင်အေထံင်ဏ်ုတ်ုဝါန့်၊ သာဏင်းဃှေဝ် ခွဲါက္ၜင်။ (မင်ရို့)၃ ခေါက်၊ (လေလေ့မင်ရို့)၃ ခေါက် အိုး..ခိုဝ်ဆံင့်ဏး……။ ထာခေါဟ်အ်ုထာင်၊ မာဘေ့ထာခေါဟ် အ်ုစာင်းလင်သိုဝ်ဏှ်လဝ့်။
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Wp/kjp/ခါန်ႋဆိုဒ်ဖေါဟ်_အ်ုမူႋဏီ_ဖတုံႋထာခေါဟ်&oldid=4399617"
This page was last edited on 26 September 2018, at 17:48.